कपालको लागि बरदान ‘भिण्डी’, यसरी घामले ड’डेको छालालाई पनि पा’र्छ गो’रो – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचककपालको लागि बरदान ‘भिण्डी’, यसरी घामले ड’डेको छालालाई पनि पा’र्छ गो’रो
एजेन्सी – हामीले तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने भिन्डीले छाला र कपालसम्बन्धि धेरै स’मस्याबाट छु’ट्कारा दिलाउँछ । जस्तै ः ड्’राई स्कि’न , स्कि’न इ’न्फेक्शन , कालो छाला, डें’ड्रफ आदि । भि’न्डीको प्रयोगबाट जवान देख्न सक्ने ८ ब्यु’टि टिप्सहरु यसप्रकार छन् ।सुन्दर कपालको लागिः१. कपालको चां’या हटाउन: सबैभन्दा पहिला भिन्डीलाई सानो गरि का’ट्नुहोस् । त्यसपछि उमालेको पानीमा हा’ल्नुहोस् । चिसो भईसकेपछि पानीलाई छा’नेर आधा कागतीको रस मि’साउनुहोस् र श्या’म्पू लगाईसकेपछि अन्तमा यस पानीले कपाल प’खाल्नुहोस् ।
भिन्डीमा प्रो’टिन पाईन्छ । र यस्ले टाउकोमा ब्ल’ड स’र्कुलेशनलाई ब’ढाउँछ । जस्ले कपाल ब’ढाउन, चां’या ह’टाउन , कपाललाई ट’ल्काउन मद्धत गर्छ ।२. स्क्ल्या’प मो’इस्चराइजर: ८ वटा भि’न्डीलाई थोरै पानीमा उ’माल्नुहोस् ।हल्का गाढा च्या’पच्याप गर्नै तरल पदार्थ बनिसकेपछि छा’नेर अ’लग राख्नुहोस् । र त्यसमा बा’सनाको लागि आफूलाई मनपर्नै तेल मि’साउनुहोस् । र नु’हाइसकेपछि यस पानीले पखाल्नुहोस् । यसबाट तपाइँको कपाल नरम, शिल्क र ट’ल्किने देखिनेछ । यदि २–४ दिन सम्म भण्डार गर्नुहुन्छ , भने डि’स्टिल वाटरमा यसलाई बनाई फ्रि’जमा राख्नुहोस् ।
यसको प्रयोग हरेक किसीमको कपाललाई सु’हाउँछ । ड्राई , कर्ली कपालको लागि यस्ले धेरै राम्रो मो’इस्चराइजरको रुपमा काम गर्छ । यसले डैं’ड्रफ र स्क्ल्या’पको चि’लाउने स’मस्याको पनि नि’राकरण गर्छ ।३. हे’यर क’न्डिशनर: माथि तयार गरिएको भि’न्डीको पानीमा कागती न’मिसाइकन नु’हाईसकेपछि कपालमा लगाई म’साज गर्नुहोस् । २ मिनेट राखि सफा पानीले कपाल प’खाल्नुहोस् ।४. ट’ल्किने कपाल: राति दुई कप भि’न्डीलाई का’टेर दुई कप पानीमा १५ मिनेट उमाल्नुहोस् । त्यस पानीलाई छानेर १० मिनेट से’लाउन दिनुहोस् । र अर्कौ भांडामा राखी रातभरीको लागि छो’ड्नुहोस् । बिहान यस्लाई कं’डिशनरको रुपमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
सुन्दर छालाको लागि: एउटा भिन्डीलाई का’टेर सफा पानीमा आधि घण्टा भि’जाएर राख्नुहोस् । यसलाई कपासको म’द्धतले अनुहारमा लगाउनुहोस् र सु’काउनुहोस । अनि सफा पानीले मुख धुनुहोस् । भिन्डीमा ए’न्टिब्याक्टेरियल , ए’न्टिफ्लामेटरी र री’हाइड्रेटिंग आदि पाईन्छ । जस्ले ड्रा’ई स्कि’न र कुनैपनि स्कि’न ई’न्फेक्शनको स’मस्या ह’टाउन मद्धत गर्छ । छाला चिलाउने स’मस्या ह’टाउन पनि यस्ले मद्धत गर्छ । भिन्डीमा भिटामिन ‘सी’ र ‘इ’ पनि पाईन्छ । जस्ले छालाको दा’गहरु ह’टाउँछ । र घामबाट कालो भएको छालालाई गो’रो बनाउँछ ।